Coulda Na Me Lyrics — njem Lee - Official Site
Agen oghere • March 23, 2018 na 7:02 pm • zaghachi
Hi! M maara na nke a bụ ụdị anya-isiokwu ma m
kwesịrị ịjụ. Ọ ewu a mma-guzobere blog dị ka gị na-achọ a oke ego
ọrụ? M kpam kpam ọhụrụ na ịde blọgụ Otú ọ dị m ka ide na m edetu na a kwa ụbọchị.
M ga-amasị na-amalite a blog otú m nwere ike ịkọrọ m ahụmahụ
na mmetụta online. Biko mee ka m mara ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla
na-atụ aro ma ọ bụ Atụmatụ maka ọhụrụ ịchọ blog nwe.